amabhizinisi yezimboni futhi commercial, amasevisi kanye nemisebenti yebantfu ngekwehlukana lihlotshaniswa ukuthuthwa kwezimpahla. Kunezinhlobo eziningana izindlela zezokuthutha, okuyinto njalo kwenziwe izinhlobo ezahlukene zokuthutha.
Road yezokuthutha isetshenziswa uma kuthunyelwa izimpahla ezincane. Uma ibanga akuyona omkhulu, futhi umkhiqizo kuyavumelana iveni ezinde ke lolu hlobo ezokuthutha kuyoba elilungile kakhulu. Ithemu kwezidingo is kunazo sizikhandle kwenziwe esebenzisa umoya ezokuthutha. Ngu emoyeni, ungakwazi ukuthutha izimpahla ukuze ucingo kwelinye izwekazi, bese ibanga ngeke kunendaba kakhulu. Ezigugayo, wezimpahla eziyingozi noma uwusizo zithutha ke ezindizeni. Ezokuthutha ngesitimela Site izinhlobo eziningi izimpahla. Model izimoto zenzelwe ukuze bakwazi ukuthwala zonke izinhlobo zezimpahla.
ibhizinisi Izithuthi kuyinto eduze okuhlobene nempahla. Yamadivayisi njengoba izingxenye, nezimoto ngokwayo kuvame wenza buqamama, ngakho ukusetshenziswa nempahla is izimo ezidingekayo. Ukuze zokuhamba izingxenye kanye izingxenye ingasetshenziswa yiluphi uhlobo kwezithuthi. Ukukhetha kusho uzimisele kuye ngokuthi lemali kanye uhla ukulethwa into yokugcina. I traffic imoto wabenza Russia, njengoba umthetho, basebenzisa iloli noma izitimela. Supply izitimela nge ngokwanele Ukugunda, ukusebenza kahle futhi waba nokwethenjelwa, ziphakathi kwezinye zezinto Izinzuzo esemqoka we ujantshi. Inqola ngayinye yakhelwe uhlobo oluthile wezimpahla, design akhethekile imishini enze kube nokwenzeka ukuba ukuthutha izimpahla nge nenduduzo esiphezulu.
Sesitimela ukuthuthwa kwezimpahla, wabenza imoto okungukuthi Russian abazenzi kwi izimoto wahlomisa ngokukhethekile. Uma kuziwa izimoto, (njengoba umthetho, zivela kwamanye amazwe), bakude ngokwanele kude Russia. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukulethwa lagcwaliseka esikhathini, futhi izimpahla safinyelela bengenamiyocu kulesi sigameko. Kukhona imithetho ethile zokuthutha ukuqinisekisa ukuthi ukulethwa ephephile izimoto endaweni.
Izimoto kuthiwa zithutha ezisekelweni ubuhlalu ezincane, okuyinto anemisila iziqobosho ekhethekile ungavumeli imoto ukuhambisa ngesikhathi hambo. Ngenxa yalokhu, umthwalo uyogwema uhlevane engadingeki ngisho esimweni unyathela amabhuleki eziphuthumayo. Kuyadingeka, ikakhulukazi kwezulu, imoto embozwe ematendeni ekhethekile. Itende Material umswakama, it kuvimbela Uqweqwe yomzimba imoto nokungcoliswa yayo.
Izimoto kungenziwa athuthwe izigubhu. Lena indlela eziqinile zokuthutha. Gilazi kuqinisekisa ukuvikeleka ngokuphelele ngokumelene ukweba kanye nokucekela phansi impahla, imoto kuyoba aphephile kwaze kwaba yilapho kufika. I yokuqukethe lockable futhi avaliwe, kwenza Ukungena umthwalo abantu okungagunyaziwe. Enye plus lokuthumela esitsheni - isivikelo ephelele ngokumelene imvula amathonya kwemvelo. Izimoto ngeke ziyobhekana novivinyo umswakama, lokushisa ukweqisa nomoya. Iziqukathi imoto ngokuphepha usebenzisa umshini.
Ukuthuthwa kwezimpahla ngesitimela ithwala eziningi izinkampani zokuthutha. Kubalulekile ukuthi esiphathiswa nayo yonke imithetho yezokuthutha, kuphela kulesi simo izimpahla aqinisekisiwe kufike kumnikazi.
Futhi ujantshi zokuthutha wabenza Russian izimoto kwenziwa yizinkampani ezokuthutha, okuyinto ukubambisana nokucwala pop ukuthengisa izimoto. Lapho ekhetha inkampani, wena kufanele aqondiswe impendulo evela kumakhasimende kanye idumela le nkampani. Kubalulekile ukuthi esiphathiswa nakho ukuthuthwa izimoto noma imishini.
Flanges ashiselwe steel flat: usayizi isicelo
Hazing ebuthweni Russian
I Yessentuki resort: incazelo, izithombe, izinto